बजार अभावमा ट्रिटमेन्ट प्लान्टको काठ बिकेन | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश ०३ बजार अभावमा ट्रिटमेन्ट प्लान्टको काठ बिकेन
बजार अभावमा ट्रिटमेन्ट प्लान्टको काठ बिकेन
चितवन । द टिम्बर कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेडमा निर्माण भएको काठ सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बजारको अभावका कारण प्रयोगविहीन बनेको छ । यस प्लान्टबाट उत्पादित काठको माग हुन नसक्दा अहिले यो प्लान्ट प्रयोगविहीन जस्तै बनेको हो ।
सो प्लान्ट नेपाल सरकारको रू. २ करोड ५० लाख अनुदानमा निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । अहिले आवश्यक काठ प्राप्त गर्न नसक्दा र यसबाट उत्पादित काठको महŒव र उपयोगिताका बारेमा जानकारी दिन नसक्दा हाल प्लान्ट बन्द छ । जिल्लामा यसबाट उत्पादित काठको प्रयोग गर्ने उपभोक्ता नहुँदा समस्या आएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख हिमलाल बरालले जानकारी दिए ।
बरालका अनुसार गत भदौ २९ गते परीक्षण गरिएको प्लान्ट फागुनदेखि सञ्चालनमा आएको थियो । सञ्चालनमा आएलगत्तै १० पटक ट्रिटमेन्ट र दुई पटक सिजनिङको काम गरिएको थियो ।
सामान्यतया सालको काठ प्रतिक्युफिट रू ३ हजार ८ सय पर्दछ भने प्रशोधन भएको काठ रू. २ हजारदेखि २ हजार ४ सयसम्म पर्ने बरालले बताए । मूल्य सस्तो पर्ने भए पनि सर्वसाधारणमा यसको विश्वास कम हुँदा काठ विक्री हुन सकेको छैन । कार्यालयले परीक्षणपछि १ हजार चार सय क्युफिट प्रशोधन गरेकोमा ३ सय क्युफिट मात्र विक्री भएको छ ।
प्लान्टमार्फत एक पटकमा सिजनिङ गर्दा १० दिनमा ७ सय क्युफिट र ट्रिटमेन्ट गर्दा ४ घण्टामा २ सय क्यूफिट काठ उत्पादन हुन्छ । एक वर्षअघि नरम जातका काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरी गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्लान्ट स्थापना गरिएको हो ।
असना, कर्मा, जामुन, सिसौ, आँप लगायतका नरम जातका काठलाई टिकाउ बनाउन र धमिरा लाग्नबाट जोगाएर सालको अभाव परिपूर्ति गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको छ ।
बजार अभावमा चीज भण्डारमै थन्कियो